5 उत्तम कुराहरू हेर्न र Koh Kohong मा गरौं (2019) | Koh Rong भ्रमण गर्नुहोस्
कोह टच मा मुख्य पर्यटक क्षेत्र हो Koh Rong। सबै सजिलै संग सुलभ मुख्य नौका सेवाहरू, समुद्र तट सलाखों, रेस्टुरेन्ट, गेस्टहाउसहरु, र बंगले देखि भरा छ। यदि तपाईं Koh टचमा बसिरहनुभएको छ भने, त्यहाँ5चीजहरू छन् जुन हामी तपाईंको लागि हेर्न र गर्न सिफारिस गर्छौं।
(थप गहिरो जानकारीको लागि, कृपया पढ्नुहोस्: Koh Rong मा सर्वश्रेष्ठ आकर्षण र क्रियाकलाप। यो पनि हेर्नुहोस्: कोहि टचमा सर्वश्रेष्ठ रेस्टुरेन्ट र बारहरू)
कोह टच Koh Koh
1) पेयमा स्काई बार
मुख्य समुद्र तट क्षेत्र मा केहि शानदार विचारहरुको लागि, रात को समयमा यो हो या दिन को समयमा, स्काई बार मा जाएँ (तपाईं नौका सम्म आइपुग्ने उच्च देख्नुहुनेछ)। यहाँ वातावरण धेरै सुखद छ, र यो राम्रो ठंड पेय संग आराम र दृश्य मा लिन को लागि एक महान ठाँउ हो।
स्काई बार | कम्बोडिया मा कोहा Rong आइल्याण्ड | Koh Rong भ्रमण गर्नुहोस्
स्काई बार एक 5-10 मिनेट केहि खपत चरणहरु माथि हिड्छ - तपाईं समुद्र तट संग यसको लागि एक चिन्ह देख्नुहुनेछ (मुख्य piers बाट दाँयामा)।
2) लामो समय बीच समुद्र तटमा हिँड्नुहोस्
यदि तपाईं आफ्नो प्रवासको समयमा केही बकाया दृश्यहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि लन्ड सेट बीचको यात्रा गर्नुहोस् अत्यावश्यक छ।
स्थानीय किसानको नाममा, यो 4km विस्तार सार्थक छ - नरम सेतो रेत, क्रिस्टल सागर सागर पानी, र एक उष्णकटिबंधीय जंगल वरिपरि।
यात्रा तपाईंको अधिकांश भन्दा धेरै दिन लाग्दछ, त्यसैले यो प्रारम्भिक बन्द गर्न राम्रो विचार हुन सक्छ। यदि तपाईं मुख्य टायरबाट टाढा हुनुहुन्छ भने, विगतमा प्रमोदवन बंगला र सेतो बीच बंगला तपाईंको बायाँ तर्फबाट, अर्को रिसोर्ट हो रुखको घर। वरपरको बाटो पछ्याउनुहोस् (तपाईले कहिलेकाहीँ जमिनमा वास्तविक समुद्र तटलाई जङ्गलमा राख्नुपर्छ) र 15 मिनेट पछि यो द्वीपमा स्वर्गमा पुग्नुहुनेछ।
अब अहिले5रिसोर्ट्स Koh Rong को यस भाग मा, हाम्रो मनपर्ने - पुरा वीटा र लामो समयसम्म। पुरा भिताले छुट्टै 'ब्याकसँग आधारभूत' छुट्टी अनुभव प्रदान गर्दछ, जबकि लन्गसेट धेरै अधिक सहज छ। यदि तपाईं कोह रङ्गमा बस्ने ठाउँ खोज्दै हुनुहुन्छ भने, हामी यी रिसोर्ट्स को सिफारिश गर्नेछौं, तर ध्यान दिनुहोस कि उनीहरु को एक राम्रो बनाए राखयो छुट्टी को लागि राम्रो उपयुक्त छ।
3) एक टापु टूर लिनुहोस्
कोह रोंग एक धेरै ठूलो टापु हो - यदि तपाईं केहि अन्य आश्चर्यजनक स्थानहरू देख्नुहुन्छ (र त्यहाँ धेरै छन्), हामी तपाईंलाई लिनको लागी सिफारिस गर्दछौं द्वीप भ्रमण.
टूर एक दिन पूरा हुनेछ, तर केहि दृश्यहरू साँच्चै शानदार छन् - प्रिन्सिन असीमित समुद्र तटहरूबाट, अद्भुत साना ज्ञात रिसोर्ट्स, विश्व प्रसिद्ध निजी द्वीपहरू र सानो माछा माछा गाँउहरु.
4) उज्ज्वल प्लैंकटन हेर्नुहोस्
यद्यपि यो घटना द्वीपमा प्रचुर मात्रामा छ, उज्यालो पन्किलो मात्र धेरै सानो उज्यालो प्रदूषणको साथ हेर्न सकिन्छ। यस्तो रूपमा, प्लैंकन हेर्नको लागि तपाईंले सबैभन्दा राम्रो तरिकालाई डुङ्गा टूर भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ (तपाईं गैर-पार्टीका रातहरूमा पुलिस बीचमा जान सक्नुहुन्छ (मुख्य ढेरबाट बाँकी 15 मिनेट) र ट्री हाउस बंगला (XIUMX मिनेट मुख्य पियरबाट दाहिने छ), वा तपाइँको बाटो बनाउनुहोस् लामो सेट समुद्र तट बाट कुनामा कोह टच).
टूर बुकिङ धेरै सीधा अगाडी अगाडी बढ्छ - तपाईले देख्नुहुने उनी समुद्र तट वरपरका विज्ञापित छन्। प्लान्कन हेर्नको लागि यात्रा $5(7pm मा छोडेर) खर्च हुनेछ। तपाईं डुङ्गा भ्रमणका क्रममा प्लैंकन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ जुन स्नोर्कलिंग, माछा, BBQ हरू र सूर्यसेटहरू समावेश गर्दछ। यसले लगभग $ 10 खर्च गर्छ र 1pm - 7pm बाट हो।
तथापि चेतावनीको एक शब्द - हामी तपाईंलाई प्लैंकटनमा तैरने सल्लाह छैनौं। यद्यपि तपाइँ इन्टरनेटमा यो सिफारिस देख्नुहुनेछ, यो वास्तवमा सुरक्षित छैन किनकि मानिसहरूले यसलाई बाहिर निकाल्छन्। एक कुराको लागि, तपाईंले रातको समय मात्र प्लैंकटन हेर्न सक्नुहुन्छ, र अँध्यारोमा तैरने कुनै राम्रो विचार कहिल्यै छैन। तपाईं सबैलाई एक उष्णकटिबंधीय वातावरणमा हुनुहुन्छ, जेली माछा, ओक्टोपस, र अरू समुद्री प्राणीहरू जुन अन्धकार भएको बेला शिकार आउँदछ।
5) स्थानीय मत्स्य पालन प्रविधि कोसिस गर्नुहोस्
यदि तपाईं आफ्नो प्रवासको समयमा केहि फरक गर्न चाहनुहुन्छ भने, एक सानो सी स्थानीय अनुभव को साथ मत्स्य पालन यात्रा, त्यसपछि बीबीक्यू तपाईं समुद्र फिर्ता गर्दा समुद्र तट मा दायाँ।
खमेर आफ्नो माछा माछाको लागि चिनिन्छ - तर कुनै पनि आधुनिक उपकरणको आशा नगर्नु हुन्छ: तपाई प्लास्टिकको बोतल र तार प्रयोग गर्नुहुनेछ।
अब, चिन्ता नगर्नुहोस् यदि तपाईं यस असल कलामा स्वाभाविक विशेषज्ञ हुनुहुन्न - तपाईंको कप्तानले तपाईंको लागि धेरै माछा समात्न सक्नुहुनेछ (शायद सबैभन्दा ठूलो माछाको लागि $3पुरस्कार प्रस्ताव गर्नुहोस्)। वास्तवमा, यो सम्भव छ कि तपाईँले प्रति घण्टा 2-3 को लागी संघर्ष गर्ने बेलामा हरेक मिनेट वा त्यहि पानीबाट बाहिर निकाल्ने छ!
एक यात्राको लागि कुल लागत $ 20- $ 30 हुनु पर्छ, तर यो $ 40 + मा जानुहोस् यदि तपाईसँग तपाइँको साथ धेरै ठूलो समूह छ। यो पनि निर्भर छ कि तपाईं कसरी जान चाहानुहुन्छ, र कसरी टाढा बाहिर जानुहुन्छ। आफ्नो कप्तानलाई सोध्नुहोस् जब तपाई फर्कनु भएको बेला BBQ लाई व्यवस्थित गर्नुहोस् - व्हाइट बीच बंगलाको नजिक Koh Koh को दाहिने तिर एक सुन्दर ठाउँ हो।
उल्लेखका केही अन्य गतिविधिहरू: ए हाई प्वाइन्ट जिप रेखा र रस पार्क; एक inflatable पानी पार्क (एक्वा कोहो Rong - पुलिस समुद्र तट बीच मा); लङ बीचमा साइकल भाडा केकिंग (सानो सानो द्वीपमा स्नोर्कलिंगको लागी वा म्यानेजुके बीचमा म्यांग्रोव नदीसम्म); पैडल बोर्डिंग; जेट स्की भाडामा (केएम वाटरपोर्ट्समा (बंदर आइल्याण्ड रिजर्भेसनमा भएको) वा गोल्डेन बंगलाहरूमा (कृपया मानिसहरूको स्नोर्कलिंग वा डाइभिङ्गको सावधान रहनुहोस्!); ट्री हाउस बङ्गलाउमा ब्लब जम्प; रङ पवनसँगको windsurfing सिक्नुहोस् बीच - लङ सेट बीच)।
एक कुरा हो कि हामी तपाईंलाई सिफारिस गर्नेछौं जुन तपाईं आइल्याण्ड्स जान्छ (जस्तै सुन्तन लोशन र मच्छर स्प्रे - धेरै ल्याउन सम्झनु अघि कुनै पनि आवश्यकताहरुमा भण्डारण गर्नु हो)। यद्यपि त्यहाँ धेरै मिनी मार्ट शैली पसल पसलहरू छन्, मूल्यहरू प्रवृत्त हुन्छन्। यो पर्यटकहरू अज्ञात छैन कि पर्यटकहरूले द्वीपलाई रातो छोड्ने र काँधमा ढाक्ने छोड्छन्!
यो ठूलो अक्षरहरू ($) तपाईंको साथ ल्याउन पनि उपयोगी छ, किनकि ठूला नोटहरू परिवर्तन गर्न गाह्रो हुन सक्छ। अब तपाईं Koh टचमा नगद प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यहाँ एक 10% चार्ज हो, त्यसोभए शायद तपाईसँग पर्याप्त पैसा लिन विचार गर्नुहोस्।
प्रश्न: म कसरी त्यहाँ पुग्छु?
कोहा Rong मा सर्वश्रेष्ठ रेस्टुरेन्ट र बार्स | सम्पादकको नोटहरू
Koh Rong भ्रमण गर्नुहोस् » ब्लग » आकर्षण र गतिविधिहरू » Koh Rong आकर्षण र गतिविधिहरु
अक्टोबर 2, 2017 जवाफ
2) Longbeach सम्म हिड्दै। त्यसो भए तपाईले लाङबेचमा हिँड्नु पर्छ यो जंगलबाट एक घन्टा हिड्न को लागी चौंकाने Longbeach, 7km को whitesand र क्रिस्टल स्पष्ट नीलो पानी कि SokSan गाँउ मा जान्छ। यद्यपि त्यहाँ राम्रो निर्माण निर्माण हुँदैछ ... तर तपाईले प्रदान गर्ने दिशा र जानकारी लन्गसेट बीच (पनि 4K को रूपमा पनि चिनिन्छ)।
त्यहाँ साहसिक एडम टूर पनि छ कि अब त्यो ठूलो टापुको वरिपरि यात्राको प्रस्ताव गर्दछ यदि तपाईं एक्लै हुनुहुन्छ वा सानो समूह हो र निजी नाका भाडामा राख्न सक्नुहुन्न। तपाईंसँग धेरै जानकारी प्रदान गर्ने पश्चिमी दिशानिर्देश पनि छ जुन तपाईं टापुको अन्वेषण गर्नुहुन्छ।
मलाई लाग्छ कि तपाईंले यस सूचीमा स्नोर्कलिङ राख्नु पर्छ - हामी एउटा स्नोर्कलिङ यात्राको लागि जानुभयो र यो ठूलो थियो
हो त्यहाँ केही उत्कृष्ट स्नोर्कलिङ यात्राहरू जुन तपाईं Koh Touch मा बुक गर्न सक्नुहुन्छ - हामी तिनीहरूलाई राख्ने योजना बनाइयो तर यसको सट्टा माछा मार्ने अनुभवको लागि गए। दुबै क्रियाकलाप शानदार छन् तापनि त्यस्ता वा! (PS हामी संक्षेप मा स्नोर्कलिंग माथि संक्षेप को उल्लेख गर्दछ - कि लिंक मा अधिक गहिराई लेख को लागि क्लिक गर्नुहोस)